Nakatona mihitsy ny oniversiten’i Mahajanga : mpianatra telo voasambotra nandoro ny Bloc 15 | NewsMada
Nakatona mihitsy ny oniversiten’i Mahajanga : mpianatra telo voasambotra nandoro ny Bloc 15
Anisan’ny antony nahatonga ny savorovoro ao amin’ny oniversiten’Ambondrona Mahajanga ny olana momba ny trano fonenan’ny mpianatra. Ny zoma teo anefa dia mbola nisy nahavanon-doza, nandoro indray ny Bloc 15. Mpianatra telo no voasambotry ny Emmo/Reg.
Nakatona tanteraka ny onivesiten’i Mahajanga taorian’ny fanapahan-kevitry ny filankevi-pitantanana noho ny antony roa. Ny savorovoro sy ny fanadiovana ny toeram-ponenan’ny mpianatra. Nanamafy ny filohan’ny oniversite any Mahajanga, ny profesora Rakotoarivony Andrianony Emmanuel, fa tsy misy ny taona fotsy eny amin’ny oniversiten’i Mahajanga. Araka ny fanapahan-kevitra noraisin’ny filankevi-pitantanana, mikatona ny oniversite ary miala amin’ny trano avokoa ny mpianatra rehetra. Anton’izany ny fanadiovana sy fandrarahana fanafody hamonoana ny bibikely mety hampisy valanaretina pesta. Efa niroso tamin’ny fanesorana ireo mpianatra mbola tavela eny amin’ny oniversite ny tomponandraikitra, ny zoma lasa teo, niaraka amin’ny mpitandro filaminana avy amin’ny Emmo/Reg. Nandritra izany no nisy nandoro indray ny bloc 15 misy ireo mpianatra avy any Nosy Be. Voasambotra ny mpianatra telo mpikambana amin’ny Bedum, voatonontonona ho nanao izany fandoroana izany. Misy mpianatra roa hafa mbola karohina.
Tonga any Mahajanga, ny zoma lasa teo, ny delegasiona avy amin’ny ninisiteran’ny Fampianarana ambony hamaha ny olan’ny oniversite ao Ambondrona. Anton’ny fitokonan’ny mpianatra ny fitakiana ny vatsim-pianarana efa-bolana (septambra- desambra 2017 ) sy ny Wifi. Eo koa ny tranon’ny mpianatra ary farany ny fitakiana ny fialan’ny mpiandraikitra iray eo anivon’ny “Géologie paléothologie muséologie”. Vokatry ny fitokonana, nasian’ny mpianatra avy amin’ny fikambanana Bureau des étudiants de l‘université de Mahajanga (Bedum) sakana ny vavahadin’ny oniversite. Nisy koa ny fifandonan’ny mpianatra samy mpianatra niteraka faharatrana mpianatra efatra avy amin’ny Conseil consultatif des etudiants (CCE). Potika sy voaroba vokatr’izany “bloc universitaire” maromaro.
Tsy maintsy samborina ny mpandika lalàna
Nisy tamin’ireo mpianatra vonona ny hiverina hianatra no nifanandrina tamin’ny mpianatra avy amin’ny Bedum. Nisy ny fihaonana tamin’ireo tomponandraiki-panjakana sy ny Emmo/Reg ary ny avy amin’ny fitantanana ny oniversite . « Tsy maintsy ampiharina ny lalàna ary samborina izay mandika lalàna. Ampy izay fanakorontanana ny oniversite izay na iza izy na iza”, hoy ny minisitra Rasoazananera Marie Monique. Nijery ny zava-nisy tany amin’ny campus Ambondrona ny delegasiona avy eo. Nanazava ny minisitra fa nanao ezaka ny fanjakana nanarina ny oniversiten’i Mahajanga nefa korontana no valiny avy amin’ny mpianatra.
Andrasana amin’ity herinandro ity ny fehinkevitra iraisana hamahana ny olana.